Tena fantatrao ve izay azonao ampidirina ao amin'ny USB C an'ny Mac? | Avy amin'ny mac aho
Ny seranan-tsambo USB C an'ny MacBook dia tonga tamin'ny taon-dasa 2016 mba hijanona amin'ny faritra manontolo ho seranan-tsambo hampiasaina amin'ny zava-drehetra. Ny hany zavatra manahirana antsika momba ity seranana ity ho antsika izay manana Mac sy iPhone dia mila adapter mba hampifandraisana azy ireo., ny sisa amin'ireo fifandraisana dia azo atao daholo na saika tsy misy filana tariby na adaptatera.
Fa rehefa mila mampifandray fitaovana iray isika ary tsy te hanao azy tsy misy tariby, afaka mampiasa USB C ho azy isika, miaraka amina hub na adaptatera foana amin'izay ilaintsika. Amin'ity tranga ity dia ho hitantsika ny zavatra rehetra azontsika ampifandraisina amin'ny Mac USB C.
USB C dia fenitra USB izay manohana ny herinaratra, ny famindrana angona ary ny famoahana horonan-tsary miaraka amin'izay hahafahantsika mampiasa azy amin'ny zava-drehetra tsy misy olana. Raha manana seranan-tsambo USB C farafaharatsiny ny Mac-nao, azonao atao ny mampifandray azy amin'ny adaptatera herinaratra USB-C hamahana ny Mac tsy misy olana. Mazava ho azy fa ity seranana ity dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny USB-C amin'ny tariby Lightning sy tariby adaptatera hampifandray ny Mac amin'ireo fitaovana hafa ary aseho rehefa tsy te hampifandray azy ireo amin'ny alàlan'ny AirPlay isika. Ireo dia ny sasany amin'ireo safidin'ny fifandraisana atolotry ny seranana amin'ny fitaovantsika:
Thunderbolt 3 (USB-C) mankany amin'ny adaptatera Thunderbolt2, raha te hampifandray ireo maodely MacBook sy iMac vaovao mifantina amin'ny fitaovana Thunderbolt 2 na fampisehoana Thunderbolt. Jereo ny lahatsoratra Apple Support Momba ny Thunderbolt 3 (USB-C) mankany amin'ny Thunderbolt 2 Adapter.
Multi-port USB-C mankany adapter AV nomerika raha mampifandray amin'ny fampisehoana HDMI, fitaovana USB mahazatra ary adapter herinaratra USB-C. Jereo ny lahatsoratra Apple Support Momba ny USB-C mankany Digital AV Multiport Adapter.
Multiport USB-C mankany VGA adaptatera raha mampifandray amin'ny fampisehoana VGA, fitaovana USB mahazatra ary adapter herinaratra USB-C. Jereo ny lahatsoratra Apple Support Momba ny USB-C mankany amin'ny VGA Multiport Adapter.
USB-C mankany adapter USB hifandray amin'ireo fitaovana USB toa ny fakan-tsary, mpanonta ary kapila USB. Ity tariby adaptatera ity dia tsy mifandray amin'ny adaptatera mandeha amin'ny herinaratra. Jereo ny lahatsoratra Support Apple Momba ny Apple USB-C mankany USB Adapter.
USB-C mankany amin'ny tariby Lightning, hampifandray ny iPhone, iPad, iPod touch na iPod nano amin'ny seranan-tsambo USB-C an'ny solosaina handrindrana sy handefasana azy. Zahao ny lahatsoratra Fanohanana an'i Apple Momba ny USB-C mankany amin'ny Cable Lightning.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Tena fantatrao ve izay azonao ampidirina ao amin'ny USB C an'ny Mac?
Avereno ny rakitra rehetra ao amin'ny Mac anao miaraka amin'ny Magicien Recovery Data EaseUS